Dood dhex martay Wiil dhalinyaro ah iyo Aabihiis oo ka mid ahaan jiray Milatarigii Soomaaliya, iyaga oo ku kala Aragti duwan waxa ay ka Aaminsan yihiin Kacaankii 21 Oktoober 1969. Maxayse ku dhamaatay doodoodii? Maxaase Aan ka baran karaa? | Arlaadi
Home Blog Dood dhex martay Wiil dhalinyaro ah iyo Aabihiis oo ka mid ahaan jiray Milatarigii Soomaaliya, iyaga oo ku kala Aragti duwan waxa ay ka Aaminsan yihiin Kacaankii 21 Oktoober 1969. Maxayse ku dhamaatay doodoodii? Maxaase Aan ka baran karaa?
Dood dhex martay Wiil dhalinyaro ah iyo Aabihiis oo ka mid ahaan jiray Milatarigii Soomaaliya, iyaga oo ku kala Aragti duwan waxa ay ka Aaminsan yihiin Kacaankii 21 Oktoober 1969. Maxayse ku dhamaatay doodoodii? Maxaase Aan ka baran karaa?
Cabdicasiis Maxamed Shidane ayaa hadalkiisa ku bilaabay. “Aabbahey oo ka mid ahaa Milatarigii Qaranka Soomaaliya, ayaan wax ka weeydiiyay kow iyo laabaatanka Oktoobar iyo waxa uu ka aaminsan yahay Afgambigii Milatariga ahaa ee Siyaad Barre dalka kula wareeggay.
Wuxuu aad iyo aad u rumeysan yahay Aabbe ilaa iyo maanta in Afgambiskaas uu ahaa kacaan billaawgiisu barakeysnaay oo bullaalay, balse gabagabadiisii lagu tagrifalay, waxaana ku dheelay Jenaraalladii iyo qabyaaladiistayaashii ku hareeraysanaay Xukunkii Siyaad Barre.
Aabbe wuxuu rumeysan yahay in Soomaalidu aysan garaneyn in si dabacsanaan ah wax loogu sheego, sidaa darteed loo baahan yahay cudud Milatari iyo in dib loo furo xabsiyo fara badan. Wuxuu rumeysan yahay in baahida loo qabo xabsiyo lagu guro danbiilayaasha ay ka badan tahay baahida loo qabo masjid iyo iskuul. Wuxuu rumeysan yahay quwad sarreysa in la helo.
Wuxuu ictiqaadsan yahay in dalkaba aysan ka jirin wax dawlad la yiraahdo. Wuxuu ku doodayaa in aysan suurtagal aheyn in aan sheeganno dawladnimo, innaga oon laheyn sirdoon, lacag, cudud milatari, dastuur laga cabsado iyo eydaloojiyad dhisan oo dalka iyo dadkaba lagu hago.
Anigu shakhsi ahaan uma riyaaqin aragtida Aabbe, oo waan ka yara furfuranahay ra’yi ahaan, haddana dooddiisa meel aan uga baxsado waan waayay. Ugu danbeyntii, waan ismacasalaameynnay, innaga oo kala mawqif ah, balse isku dareen dhaw”. Cabdicasiis Maxamed Shidane
Waxaan ka baran karaa si kasta oo Aan u kala Aragti duwan nahay oo u kula taagan nahay mawqifyo kala duwan inaan isixtiraamno oo isku dareen ka haano arrimha dalkeena sida Cabdicasiis Maxamed Shidane iyo Aabihiis oo ka mid ahaan jiray ciidanka Xooga dalka Soomaaliyed.